Hadii Prof. Jawaari guulaysto, wax ma ka badali karaa tartanka Madaxweynanimo ? – idalenews.com
Muqdisho:Wasiiro katirsan XDF ayaa maanta shir jaraa’id ku qabtay Airporka Magaalada…
Hadii Prof. Jawaari guulaysto, wax ma ka badali karaa tartanka Madaxweynanimo ?
Muqdisho(INO)- Waxaan jeclaystay inaan tacliiq yar ka bixiyo natiijada gudoomiyaha baarlamaanku suurtagalnimada saamaynta ay ku yeelan karto tartanka madaxweynanimada Soomaaliya, anagoo soo qaadanayna tijabooyin soo dhacay, isida uu shakhsiyan wax ka badali karo hanaanka doorashada madaxweynanimda iyo in hadiiba ay jirto cid isaga wadata oo dhaqaale ku bixinaysa, ma u sahli karaa hanashada kurisiga dalka ugu sareeya?
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa xiligii doorashada xildhibaanada lagu guda jiray shuruud uga dhigay xildhibaanada tartamayey in aan laysu sharixin kursiga gudoomiyaha baarlamanka, taa badalkeedana lagu taageero isaga Musharaxnimadiisa Madaxweyne. Waxaana xusid mudan in dhamaan xildhibaanada Koonfur Galbeed ay ku waafaqeen arinkaas, balse xaalku wuxuu is badalay markii la dhaariyey xildhibaanada oo uu Xil. Idiris Dhakhtar daqiiqado kadib uga dhawaaqay musharaxnimadiisa goobta ay xaflad dhartu ka socotay.Waxaa intaa dheer in ay jiraan kulamo ka kala dhacay Baydhabo iyo Muqdisho oo ay ka soo qayb galeen xildhibaanda iyo siyaasiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya intooda aan ku qanacsanayn fikirka Shariif ee ah in cid kale lagu taageero kursiga gudoonka baarlamaanka, waxayna siyaasiintaas soo hordhigeen madaxweyne Shariif Xasan inuu u cadeeyo sadex arimood si ay qayb uga noqdaan ololihiisa madaxweyne. Waxaana ka mid ahaa:
Inuu haysto dhaqaale ku filan, madaama ay u baahan tahay madaxweynanimo laysu sharaxo dhaqaalo faro badan
In ay jiraan wadamo siyaasada Soomaaliya xiiseeya oo gadaal ka riixaya ololihiisa doorasho.
Inuu soo bandhigo qorshe cad oo lagula dagaal gali karo, sida: isbahaysiyo dhanka qabiilada Soomaaliyeed Xildhibaanadooda iyo Maamul goboleedyada.
Waayo aragnimadiisa shaqo iyo sida wanaagsan oo u maareeyey maamulka baarlamaanka mudadii afarta sano ahayd, waxaa xusid mudan in maanta kulankii kowaad ee baarlamaanku yeesheen laga heli karo qoraalka doodihii dhacay Augst, 24, 2012 kaydka gudoonka baarlamaanka, taas oo aad uga duwan habka ay u shaqeeyan xafiisyada kale oo dowladda.
Xildhibaanada cusub oo aad ugu riyaaqay maamulka fiicn ee ay kala kulmeen xafiisyada gudoomiyaha Baarlamaanka, xiligii ay qaadanayeen shahaadoyinka aqoonsiga, ID card, Nuqulada Dastuurka, Habraac dhaarta iyo doorashada iyo sidii quruxda badnayd ee loo soo agaasimahay xafladii dhaarta.
Waxaa kale oo Jawaari can ku noqday odaynimo iyo isu jiid jiid xal raadin ah oo uu markasta isku dayi jiray marka ay soo ifbaxaan khilaaf siyaasadeed, in kasta oo mar marka qaar looga itaal roonaanayey jihaynta iyo xal ka gaarida qaabka uu urabo in khilaafka loo xaliyo.
Cid ka fursad badan oo aan jirin maanta marka loo eego musharixiinta ilaa iyo hada tartanka kula jirta
Shaqada hortaal Baarlamanka oo ay uga dagsan tahay qorshayaal cad cad dhamaystirkooda madaama uu yaqaan waxa soo qabsoomay iyo wax dhiman.
Dhex Dhexaadnimo marka loo fiiriyo la macaamilka xildhibaanada iyo talo dhagaysi marka wax la xalinayo, iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed oo aan u arkin shakhsi xisbi ama urur gooni ah ka tirsan.
President Hassan pledges to complete job once re-elected
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Xarigga Ka Jaray Dhismaha Aqalka Sare ee BFS